Hawlaha Wabiga waa urur aan faa'iido doon ahayn oo loo qoondeeyey horumarinta cimilada dhaqaale, dhaqaale, iyo dhaqanka ee Wabiga Mississippi iyo wabiga dooxada Quad Cities ee waqooyi galbeed Ilinois iyo koonfur bari Iowa. River Action waxay dhiirigelineysaa helitaanka ballaadhanka webbiga, waxay dhistaa oo sii fidisaa wadiiqooyinka madadaalada ee webiyada, waxay ilaaliyaan deegaannada halista ah, oo waxay nadiifisaa webiga.
Degaannada dib loo soo celiyay waxay u muuqdaan kala duwanaansho kala duwan oo caan ku ah ubaxyada iyo cawska oo soo jiidanaya noocyo kala duwan oo duur joogta ah, oo ay ku jiraan feerka biyaha, duufaanka, dhoobada, iyo rahamka.
Barnaamijka River McKnight ee barnaamijka Mississippi River, River Action ayaa heley deeq guud oo lagu taageerayo shaqadooda si loo wanaajiyo caafimaadka Wabiga Mississippi iyo dhulka ku wareegsan. Barnaamijka McKnight ee barnaamijka Mississippi River wuxuu taageertaa dadaallada dib u soo celinta iyo ilaalinta daadadka iyo qoyaanka dhulalka 10-gobol ee Mississippi River corridor, iyo hoos u dhigista wasakheynta beeraha ee afar gobol oo ku yaal qaybta woqooyiga wabiga, diiradda saarnaanta beeraha iyo hawlgallada heerarka sare ee nitrogen iyo fosfoorka dushiisa.
River Action waxay la wadaagtay magaalooyinka Moline, Illinois si ay u soo celiso in ka badan 30 acres oo qoyan oo qoyan oo udhaxeeya Greenvalley Sports Complex iyo River Rock, oo ah qaybta ugu weyn ee Mississippi. Qeyb ka mid ah maalgelinta EPA iyada oo loo marayo Sharciga Biyaha ee Nadiifinta, mashruucu wuxuu baddalay laba dhuun daloolo iyo bakhaar farsamo oo dabiici ah, biyo qulqulaya, qulqulo casri ah, qulqulaha sedge, iyo ciriiriga qoyan. Degaannada dib loo soo celiyay waxay u muuqdaan kala duwanaansho kala duwan oo caan ku ah ubaxyada iyo cawska oo soo jiidanaya noocyo kala duwan oo duur joogta ah, oo ay ku jiraan feerka biyaha, duufaanka, dhoobada, iyo rahamka. Aaggu wuxuu kaloo leeyahay shabakad raadin, oo lagu buuxiyo calaamadaha fasiraadda, kuraasta, iyo heerarka sare.
River Action waxay leedahay taariikh 25 sano ah oo leh awood xoog leh, taageero maxalli ah iyo xoogga saarida shabakada. Labada gobol iyo laba degmo, River Action waxay la shaqeeyaan 12 bulsho oo labada dhinacba ka kooban 65 mitir u dhexeeya Wabiga Mississippi. Waxay soo qaadeen baaqa ah in ay keenaan aag dabiici ah oo ku nool gobolka Quad Cities si ay u soo jiidato beelahooda iyo in ay kobciso cunsurinimada khayraadka cajiibka ah.